हेटौंडाको ओम्याक्स सिनेमा हलमा भीषण आगलागि , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
HOME » हेटौंडाको ओम्याक्स सिनेमा हलमा भीषण आगलागि
हेटौंडाको ओम्याक्स सिनेमा हलमा भीषण आगलागि
हेटौंडा उपमहानगरपालिकास्थित ओम एण्ड ओम्याक्स सिनेमा हलमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिइएको छ। नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर स्थापना गरिएको हलमा बुधबार बिहान आगलागि भएको थियो। बिहान करिव नौं बजेबाट सुरु भएको आगलागि ४ घण्टापछि नियन्त्रणका लिइएको हो। आगो नियन्त्रणका लागि हेटौडा महानगरपालिका, नेपाल आयल निगम अमेलखगंज र वीरगंज उपमहानगरापालिकाको दमकल प्रयोग गरिएको थियो।
आगालागिबाट हलको भित्री भाग सबै जलेर नष्ट भएको हल संचालक राममान भण्डारीले जानकारी दिए। आगलागिबाट करिव १० करोड बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। आगो विद्युत सर्ट भई लागेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। २ तल्ले भवनको सबै भाग आगोले सखाप पारेको छ। नेपाल चलचित्र बिकास बोर्डका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र महर्जनको व्यवस्थापनमा हल सञ्चालन हुँदै आएको थियो। ४ सय सिट क्षमताको सो हल ७ वर्ष अघि स्थापना गरिएको थियो।